ကမ္ဘောဒီးယား (13) ထိုင််း (10) ဗီယက်နမ် (9) လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရ... (8) မြန်မာ (8) Global (3) တရုတ် (2) ဘင်္ဂလားဒေရှ် (1) ဘရူနိုင်းဒါရုဆလင် (1) ဘူတန် (1) အင်ဒိုနီးရှား (1) မလေးရှား (1) နီပေါ (1)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (23) ထိုင်း (3) ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား (3) ခမာဘာသာစကား (1)
WMS (21) SHP (16) DB_TABLE (14) JPEG (7) GeoJSON (4) ZIP (4) CSV (3) KML (3) ESRI Grid (1) GeoTIFF (1) HTML (1) PDF (1)
Open Development Me... (9) Open Development Ca... (7) Open Development Th... (4) Open Development Vi... (3) Open Development Laos (2) Open Development My... (2)
သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (27) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (10) ဇီဝမျိုးကွဲများ (8) ကြိုးဝိုင်းဧရိယာများ (7) SDG 15 Life on land (6) ကာကွယ် သစ်တောများ (5) နိုင်ငံတော်မှကန့်သတ... (4) သစ်တောမြေဧရိယာ ဖုံး... (3) ပင်လယ်ရေပိုင်နက် နှ... (3) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင... (2) သစ်တောကာကွယ်စောင့်ရ... (2) အမျိုးသား ဥယျာဉ်မျာ... (2) Sustainable develop... (2) တိရိစ္ဆာန်များ (1) ရပ်ရွာလူထုပိုင် သစ်တော (1) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်... (1) ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ ဝန်ဆေ... (1) ဂေဟစနစ်များ (1) သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှု... (1) ဥပဒေရေးရာနှင့် တရား... (1) အပင်များ (1) ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ... (1) SDG 14 Life below w... (1) SDG6Clean water a... (1) သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း (1) ရေအရင်းအမြစ်များ (1)
CC-BY-4.0 (7) Creative Commons At... (6) Other (Attribution) (3) unspecified (3) CC-BY-SA-4.0 (2) License not specified (2) Other (Open) (2) Creative Commons At... (1) Other (Public Domain) (1)
ခေါင်းစဥ်များ: Environmental and biodiversity protection None: dataset
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2021၊ 16 ဇူလိုင် ရင်းမြစ်: Ocean Data Viewer (https://data.unep-wcmc.org/datasets/44) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ
ထိုင််း 2021၊2ဇူလိုင် ရင်းမြစ်: Open Government Data of Thailand... တိရိစ္ဆာန်များ, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ, အပင်များ
ထိုင််း 2021၊ 26 ဇွန် ရင်းမြစ်: GISTDA Portal... ကြိုးဝိုင်းဧရိယာများ, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း, အမျိုးသား ဥယျာဉ်များနှင့် တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် ဘေးမဲ့တောများ
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2021၊ 15 မေ ရင်းမြစ်: UNEP-WCMC, WorldFish Centre, WRI, TNC (2018). Global distribution... ပင်လယ်ရေပိုင်နက် နှင့် ကမ်းရိုးတန်း ဧရိယာ, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
Global 2021၊5မေ ရင်းမြစ်: TNC မြေပုံများမှ (https://maps.tnc.org/gis_data.html) ဂေဟစနစ်များ, ဇီဝမျိုးကွဲများ, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
Olson, D. M နှင့် E. Dinerstein (၂၀၀၂)၊ Bailey (၁၉၉၅) နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုပ်ရှားရှိ ကနေဒါ (Wiken, 1986) မှစတင်တီထွင်ခဲ့သည်။ ဤအချက်အလက်အလွှာများကိုသဘာဝထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေ...
Global 2021၊5မေ ရင်းမြစ်: TNC မြေပုံများ (https://maps.tnc.org/gis_data.html) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရေချိုဂေဟာ, (FEOW) ကမ္ဘာမြေ၏ရေချိုဇီဝမျိုးကွဲများကိုကမ္ဘာရှိဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနယ်ပယ်သစ်အဖြစ် ပံ့ပိုးပေးသည်။ကမ္ဘာပေါ်ရှိရေချိုကျက်စားရာနေရာများအားလုံးနီးပါးကိုဖုံးလွှမ်းထ...
Global 2021၊5မေ ရင်းမြစ်: TNC မြေပုံများ (https://maps.tnc.org/gis_data.html) ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ, ပင်လယ်ရေပိုင်နက် နှင့် ကမ်းရိုးတန်း ဧရိယာ, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
ကျားထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဥယျာဉ် (Tiger Conservation Landscape)
ဘင်္ဂလားဒေရှ်, ဘူတန်, ဘရူနိုင်းဒါရုဆလင်, ကမ္ဘောဒီးယား, တရုတ်, အင်ဒိုနီးရှား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မလေးရှား, မြန်မာ, နီပေါ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2021၊5မေ ရင်းမြစ်: ကမ္ဘာဆိုင်ရာသစ်တောစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ... သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း, အမျိုးသား ဥယျာဉ်များနှင့် တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် ဘေးမဲ့တောများ
WWF နှင့် RESOLVE မှထုတ်လုပ်သောဤအချက်အလက်သုံးခုသည်လက်ရှိကျားကျက်စားရာနေရာနှင့်ဒေသများထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ဦးစားပေးဒေသများကိုပြသည်။ Tiger Conservation Landscapes (TCLs) သည်...
ထိုင််း 2021၊ 19 မတ် ရင်းမြစ်: Forest Land Management Office (https://bit.ly/30ZiAhz) Royal... သစ်တောမြေဧရိယာ ဖုံးလွှမ်းမှု, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
ထိုင််း 2021၊ 10 ဖေဖော်ဝါရီ ရင်းမြစ်: GISTDA Portal... ကြိုးဝိုင်းဧရိယာများ, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
ဗီယက်နမ် 2021၊7ဇန်နဝါရီ ရင်းမြစ်: Asian Development Bank / Protected areas database: IUCN and... ကာကွယ် သစ်တောများ, ဇီဝမျိုးကွဲများ, နိုင်ငံတော်မှကန့်သတ်ထားသော သဘာဝနယ်မြေအမျိုးအစားများ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုလေ့လာချက်, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2020၊ 30 အောက်တိုဘာ ရင်းမြစ်: The World Database on Protected Areas (www.protectedplanet.net) ကာကွယ် သစ်တောများ, ကြိုးဝိုင်းဧရိယာများ, ဇီဝမျိုးကွဲများ, သစ်တောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
A dataset describing protected areas and heritage sites throughout the Lower Mekong Countries. The World Database on Protected Areas (WDPA) is the most comprehensive global...
လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ 2020၊ 1 ဒီဇင်ဘာ ရင်းမြစ်: Wildlife Conservation Society... နိုင်ငံတော်မှကန့်သတ်ထားသော သဘာဝနယ်မြေအမျိုးအစားများ, သစ်တောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ 2020၊ 30 အောက်တိုဘာ ရင်းမြစ်: Asian Development Bank / Protected areas database: IUCN and... သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ
ကမ္ဘောဒီးယား 2018၊ 13 ဇွန် ရင်းမြစ်: The forest monitoring system which is the product of collaboration... သစ်တောမြေဧရိယာ ဖုံးလွှမ်းမှု, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
This forest cover is extracted from the Forest Monitoring System (https://rlcms-servir.adpc.net/en/forest-monitor/) which is developed by SERVIR-Mekong and the Global Land...
ကမ္ဘောဒီးယား 2019၊6ဧပြီ ရင်းမြစ်: GIS portal of the Ministry of Environment of... သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
Biodiversity conservation corridors are uninterrupted areas of forest and other habitats rich in biodiversity that link between the natural protected areas (NPA). This dataset...
မြန်မာ 2019၊ 29 ဒီဇင်ဘာ ရင်းမြစ်: http://www.globalforestwatch.org/country/MMR သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုအစီရင်ခံခြင်း, သစ်တောမြေဧရိယာ ဖုံးလွှမ်းမှု, သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ
ဤဖိုင်တွင် သစ်ပင်များဖုံးလွှမ်းခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်အမြတ်ရရှိခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်သော ဇယားအချက် အလက်များပါဝင်သည်။ ဒေတာအစုတစ်ခုစီ၏ သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုသိလိုပါက data.gl...
ကမ္ဘောဒီးယား 2019၊ 18 နိုဝင်ဘာ ရင်းမြစ်: Royal Gazette from government of Cambodia, Sub-decree and Prakas,... ကြိုးဝိုင်းဧရိယာများ, နိုင်ငံတော်မှကန့်သတ်ထားသော သဘာဝနယ်မြေအမျိုးအစားများ, ရပ်ရွာလူထုပိုင် သစ်တော, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
This dataset contains data of community zones in the natural protected areas such as the national park, biodiversity conservation corridor, wildlife sanctuary, and protected...
မြန်မာ 2019၊2နိုဝင်ဘာ ရင်းမြစ်: The original data is from Fishery and Aquaculture Country Profiles... ပင်လယ်ရေပိုင်နက် နှင့် ကမ်းရိုးတန်း ဧရိယာ, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
ဤ shape file သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများကိုဖော်ပြထားသည်။ Layer ကို Online ပေါ်ရှိ မြန်မာ့ ပင်လယ် ပြင် သဘာဝမျိုးကွဲများပြမြေပုံမှရရှိထားသည်။ မြေပုံများတွင် မြန်မာနိ...